Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Dhexe Ee JWXO oo Maanta Jigjiga Kukulmay.
Golaha Dhexe Ee JWXO oo Maanta Jigjiga Kukulmay.
Waxaa hada xafiiska Xoghayaha Guud ee JWXO mudane Cabdiraxmaan Mahdi kusoo dhamaaday kulan balaadhan oo ay kasoo qayb galeen xubnaha Golaha Dhexe ee JWXO ee magaalada Jigjiga kusugan.
Kulankan oo ahaa kulan muhiim ah ayaa ubadnaa kala warqaadasho iyo dajinta qorshayaal muhiim ah ayaa saaka subixii hore ka qabsoomay guriga Xoghayaha Guud ee JWXO ee xarunta Dulqabow.
Xoghayaha Guud ee JWXO mudane Cabdiraxmaan Mahdi (Maaday) oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Addis Ababa ayaa xubnaha Golaha Dhexe ee JWXO uga warbixiyay howlihii shaqo ee uu ugu maqnaa magaalada Addis Ababa, iyo kulankii dhex maray madaxda JWXO iyo Raysal-wasaaraha Itoobiya, Abiye Axmed, kaas oo dhawaan kaqabsoomay magaalada Jigjiga.
Xoghaye Maaday ayaa sheegay in waftigii JWXO iyo Abiye Axmed ay isku afgarteen dhamaan qodobadii ay kawada hadleen oo isugu jiray dhamaystirkii heshiiskii ONLf iyo Itoobiya iyo waliba arimo kale oo laxidhiidha masiirka shacabka Soomaalida Ogadenia.
Sidoo kale kulanka ayaa lagu qorsheeyay socdaal ay madaxda JWXO ku aadi doonaan Gobolada wadanka Ogadenia, kaas oo mudaba lasugayay, waxayna madaxdu kadoodeen qaabka uu socdaalku ku hirgali lahaa iyo xiliga uu hirgali lahaa.
Sidoo kale madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa kadooday kalfadhigii Golaha Dhexe ee JWXO iyo xiliga loocayimay ee ladoonayo in uu qabsoomo.
Kulanka Xoghayaha Guud ee JWXO iyo xubnaha Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO oo mudo socday ayaa kudhamaaday is afgarad, waxaana si mugleh oo dajiyay dhamaan qorshayaashii laga dooday.